बीमा पोलिसी(Insurance policy)
सरकारले रकम नदिँदा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा समस्या
काठमाण्डौ । सरकारले कोरोना बीमाका लागि रकम निकासी नगर्दा दाबी भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको छ। सरकारले दिनुपर्ने रकम नदिँदा बीमितहरुले दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन। कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमण दर उच्च रहेकै बेला अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने बीमा कम्पनीहरुले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकेका हुन्। जसका कारण योग्य भईकन पनि...
पत्रकारहरुका लागि रु. ७ लाख सम्मको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था, प्रिमियमको ५०% रकम सरकारले व्यहोर्ने
काठमाण्डौ । श्रमजिवी पत्रकारहरुका लागि रु. ७ लाख सम्मको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पत्रकारहरुका रु. ७ लाख सम्मको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिने बताएका हुन् । यसमा बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले ब्योहोर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ उनल ेबताए । यस्तै...
पशु तथा कृषि बीमाको प्रिमियममा ५०% छुटको व्यवस्था कायमै
काठमाडौं । पशु कृषि तथा बाली बीमा गर्दा लाग्ने प्रिमियममा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ...
बीमा कम्पनीहरुले कोरोना संक्रमित कर्मचारीको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नुपर्ने
काठमाण्डौ । बीमा कम्पनीमा कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई कारोना संक्रमण भए निजको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने भएको छ। बीमा समितिले परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीमा कार्यरत कुनै कर्मचारीलाई कोभिड १९ को संक्रमण देखिएमा संक्रमित कर्मचारी तथा निजको सम्पर्कमा रहेका कर्मचारी समेतलाई सम्पूर्ण खर्च(पीसीआर परीक्षण...
सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरद्वारा अभिकर्ताहरुलाई कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी रकम हस्तान्तरण
काठमाण्डौ । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले विश्वव्यापी फैलिरहेको महामारी कोभिड–१९ विरुद्ध आफ्ना अभिकर्ताहरुको बीमा गराएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा उच्च मूल्यांकन गर्दै सेवामा थप उत्साह र उच्च मनोबलका साथ हौसला प्रदान गर्नका लागि सिटी एक्सप्रेस मनी...
कोरोना बीमा बापत ४८,०६९ जनाले प्राप्त गरे ४.६६ अर्ब बढी दाबी भुक्तानी
काठमाण्डौ । बीमा समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो आँकडा अनुसार फागुन २१ गतेसम्म ४८ हजार ०६९ जनाले कोरोना बीमा बापत ४ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गरेका छन्। बीमा समितिका अनुसार सबै कागजपत्र पुरा भएको दाबी संख्या ८४ हजार ८७४ रहेको छ। यसैगरी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि बीमा पुलमा पठाईएकामध्ये ३६९३ फाइल...
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी ४ अर्ब नाघ्यो
काठमाण्डौ । बीमा समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो आँकडा अनुसार फागुन ७ गतेसम्म ४१ हजार २६१ जनाले कोरोना बीमा बापत ४ अर्ब ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गरेका छन्। बीमा समितिका अनुसार सबै कागजपत्र पुरा भएको दाबी संख्या ७७ हजार १२८ रहेको छ। यसैगरी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि बीमा पुलमा पठाईएकामध्ये ३५७५ फाइल...
दश दिनको अवधिमा ५ हजार बढीले कोरोना बीमाबापत प्राप्त गरे ४९ करोड बढी दाबी भुक्तानी
काठमाण्डौ । दश दिनको अवधिमा ५ हजार बढीले कोरोना बीमा बापत ४९ करोड बढी दाबी भुक्तानी प्राप्त गरेका छन् । बीमा समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो आँकडा अनुसार माघ २२ गतेसम्म ३६ हजार ५६९ जनाले कोरोना बीमा बापत ३ अर्ब ५५ करोड २९ लाख २५ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गरेका छन्। बीमा समितिका अनुसार सबै कागजपत्र पुरा भएको दाबी संख्या ६५ हजार...
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी ३ अर्ब नाघ्यो
काठमाण्डौ । बीमा समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो आँकडा अनुसार माघ १२ गतेसम्म ३१ हजार ४४१ जनाले कोरोना बीमा बापत ३ अर्ब ६ करोड १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गरेका छन्। बीमा समितिका अनुसार सबै कागजपत्र पुरा भएको दाबी संख्या ६० हजार १६१ रहेको छ। यसैगरी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि बीमा पुलमा पठाईएकामध्ये ३०७९ फाइल...
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी २.४६ अर्ब नाघ्यो, २,७२१ फाइल कम्पनीमै फिर्ता
काठमाण्डौ । बीमा समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो आँकडा अनुसार पुस २९ गतेसम्म २५ हजार ३१३ जनाले कोरोना बीमा बापत २ अर्ब ४६ करोड २७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गरेका छन्। बीमा समितिका अनुसार सबै कागजपत्र पुरा भएको दाबी संख्या ५१ हजार ७१७ रहेको छ। यसैगरी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि बीमा पुलमा पठाईएकामध्ये २७२१...
कोरोना बीमा बापत २१,५०१ जनालाई प्रदान गरियो २ अर्ब बढी दाबी भुक्तानी
काठमाण्डौ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा तिव्रता आएको छ। बीमा समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो आँकडा अनुसार पुस २१ गतेसम्म २१ हजार ५०१ जनाले कोरोना बीमा बापत २ अर्ब ९ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गरेका छन्। बीमा समितिका अनुसार सबै कागजपत्र पुरा भएको दाबी संख्या ४२ हजार १५३ रहेको छ। यसैगरी कोरोना...
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा तिव्रता, चार दिनको अवधिमा थप १ हजार बढीले प्राप्त गरे
काठमाण्डौ । कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा तिव्रता आएको छ। चार दिनका अवधिमा थप १ हजार ५ सय ६८ जनाले कोारेना बीमाको दाबी भुक्तानी प्राप्त गरेका छन्। बीमा समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो आँकडा अनुसार पुस १३ गतेसम्म १६ हजार ९४९ जनाले कोरोना बीमा बापत १ अर्ब ६५ करोड २१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गरेका छन्। गत पुस ९ गतेसम्म...
कोरोना बीमा बापत १५ हजार बढीले प्राप्त गरे १ अर्ब ५० करोड दाबी भुक्तानी
काठमाण्डौ । बीमा समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो आँकडा अनुसार पुस ९ गतेसम्म १५ हजार ३८१ जनाले कोरोना बीमा बापत १ अर्ब ५० करोड ११ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गरेका छन्। बीमा समितिका अनुसार सबै कागजपत्र पुरा भएको दाबी संख्या २८ हजार २९२ रहेको छ। यसैगरी कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि बीमा पुलमा पठाईएकामध्ये २०५३...
११ दिनको अवधिमा ५ हजार बढीले प्राप्त गरे कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी
काठमाण्डौ । ११ दिनको अवधिमा ५ हजार बढीले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रकम प्राप्त गरेका छन्। बीमा समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो आँकडा अनुसार यस अवधिमा करीब ५ हजार ७०३ जनालाई कोरोना बीमा वापतको दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराईएको हो। गत मंसिर २४ गतेसम्म ८ हजार १४५ जनालाई कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गरिएकोमा पुस महिनाको ५ गतेसम्म १३ हजार ८४८...
समितिको स्थलगत निरीक्षणको क्रममा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा देखिए यस्ता समस्या
काठमाण्डौ । विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेका समाचारहरुलाई मध्यनजर गर्दै नियामक निकाय बीमा समितिले कोरोना बीमाको पुल व्यवस्थापक शिखर इन्स्योरेन्स लिमिटेडमा स्थलगन निरीक्षण गरेको छ। समितिले उक्त निरीक्षणका दौरान ४ वटा मुख्य समस्याहरु पहिल्याएको जनाएको छ। निरीक्षणका क्रममा बीमा लेख खरिद गरेका बीमितहरुले दाबी भुक्तानीका लागि...